Parthenocarpic kukumba iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Parthenocarpic kukumba iche
Nke a bụ ihe ọhụrụ: Parthenocarpic cucumbers
N'ebe a nke osisi cucumber, a na-enweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke bụ mkpụrụ nke ndị na-azụlite oge. Onye ọ bụla na-eji ihe odide nkịtị nke ụdị "dịgasị iche iche" ma ọ bụ "ngwakọ." Ma na ụfọdụ sachets ị nwere ike ịhụ ahịrịokwu dịka "Parthenocarpic hybrid", na ndị mmadụ aghọtachaghị ihe okwu a pụtara.
Nyere onwe gị aka: cucumbers
Na mmalite nke oge a, ọtụtụ ndị na-anọ n'oge okpomọkụ na-achọ ụdị cucumbers ọhụrụ ndị na-agaghị achọ nlekọta pụrụ iche ma na-enye ihe owuwe ihe ubi. Mana nsogbu nwere ike ibili mgbe ị na-eto eto a na greenhouses. E kwuwerị, ọtụtụ kukumba dị iche iche chọrọ pollination site na aṅụ, na otu esi eme ya na a mechiri emechi?
Kedu ka esi eto cucumbers "obi ike": ndụmọdụ agronomists
O siri ike ịchọta onye na-elekọta ihe ubi nke na-agaghị etinye cucumbers. Ma, ọ ma na ọganihu na-eto eto ubi a na-adabere na nhọrọ dị mma nke osisi dị iche iche. N'ihi na ịgha mkpụrụ na ala na-emeghe bụ ihe ruru eru maka ọkwa "Obi ike". Kukumba "Obi ike F1": àgwà dị iche iche di iche iche Nkọwa nke cucumbers "Obi ike" nwere ozi na osisi ahụ na-akọwa ụdị okooko osisi.
Kukumba "Zozulya": nkọwa nke ụdị dị iche iche na agrotechnics
Uru nke cucumbers dị n'oge okpomọkụ bụ na mkpụrụ osisi ndị dị n'ime obere oge adịghị njọ. N'etiti ndị na-emepụta ihe oriri, kukumba dịgasị iche iche "Zozulya F1" dị oke egwu n'etiti ndị na-eto eto na-eto eto. N'ime afọ 40 nke ịdị adị ma na-eto eto 100, ọ kwadoro ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Tụlee atụmatụ nke ịkụ mkpụrụ na griin ha na ubi.
Kedu ka esi eto tomato cucumber "Masha f1" n'ọhịa
N'etiti ụdị kukumba dịgasị iche na ọtụtụ, ndị Dutch, otu mkpụrụ osisi kukumba dị mkpirikpi na aha na-adọrọ mmasị bụ "Masha f1" na-ebute ụzọ kachasị mma. Akụkọ ihe mere eme Iji mụtakwuo banyere cucumbers "Masha f1" na ndị isi mba dị iche iche ma ghọtakwuo ihe niile gbasara nsị, ị ga-ezo aka na nkọwa ya.
Nnukwu owuwe ihe ubi na obere ebe: Taganay cucumbers dịgasị iche iche
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị na-azụlite akwụkwọ dị iche iche nke "Taganai" dị na nso nso a, ha ejirilarị ghọọ ndị ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị nwe ụlọ ezumike. Ụdị ngwakọ Ural dị iche iche dị mma maka ịkụnye na azụ nke obere mpaghara, n'ihi na ọ na-enye gị ohere inakọta nnukwu mpịakọta nke ihe ubi sitere na obere osisi bushes.
Early mfri eke kukumba "Crispin F1"
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-enwe mmasị na ihe ọkụkụ ndị na-eme ka ihe ubi buru ibu karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eto eto tomato, cucumbers ma ọ bụ akwụkwọ nri ndị ọzọ - oge mbụ ma ọ bụ oge ha ga-esi na-eto eto ga-abụ nnukwu arụmụka maka otu ma ọ bụ ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu mkpụrụ osisi cucumbers nke na-adọrọ adọrọ mmasị, nke na-enye gị ohere iwe ihe ubi mbụ n'oge obere oge.
Mmalite na-amị mkpụrụ ma na-amị mkpụrụ: atụmatụ nke kukumba dị iche iche na-elekọta
N'agbanyeghi otutu nke otutu iche iche cucumber, otutu ndi oru ubi na-eto eto Emerald, nke nwere ezigbo nghota. Ka anyi ghota ihe omuma nke di iche iche na uru ya karia ndi ozo. Foto na nkọwa Nkọwa cucumbers dịgasị iche iche nwere ọdịdị dị mma, ma ndị nwe ụlọ nwere ahụmahụ ka na-aṅa ntị na ụfọdụ nuances.
Na-ekwenye ekwenye ma na-eto eto n'oge: Siberia garland cucumbers dịgasị iche iche
Mgbe ụfọdụ, mpaghara ebe ndị dịpụrụ adịpụ adịghị ekwe ka ịnye ohere zuru oke maka akwa ndị nwere akwụkwọ nri ndị dị otú ahụ dị ka cucumbers. N'okwu a, ndị bi n'oge okpomọkụ nwere ike ịchekwa ịkụ mkpụrụ dị iche iche "Siberia garland F1". Cucumbers nke ọdịnihu: nkọwa Site na F1 ederede na aha, o doro anya na "Siberia garland F1" na-ezo aka ụdị hybrid.
Kukumba Meringue: nkọwa na cultivation
Iji nweta ezigbo mkpụrụ nke cucumbers, ọ dị gị mkpa iji ụzọ dị mkpa maka ịhọrọ ụdị dị iche iche. A na-emetọ ha site na aṅụ, na pollinated onwe-ha. Ndị a gụnyere ụdị cucumber dị iche iche. Ka anyị lebakwuo anya na njirimara niile na nkà na ụzụ na-eto eto. Nkọwa nke Kukumba dịgasị iche iche "Meringue F1" bụ ihe ọhụrụ ngwakọ onwe onye na-emetụta ngwa ngwa dịgasị iche iche nke ndị Dutch breeders.
Kukumba "Ụlọ akwụkwọ F1": àgwà na ịkọ agrotechnology
Ịhọrọ ụdị cucumbers dị iche iche, ọ na-esiri ike ịchọpụta n'ihi obi abụọ na mkpụrụ, iguzogide ọrịa, àgwà nro na àgwà nke ịkụ ihe, ịkụ mkpụrụ, nchekwa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ajụjụ niile na-akpali akpali gbasara ọkụ Ekol F1-kukumba mbụ - otu n'ime ndị ọhụrụ ọhụrụ nke nhọrọ.
Kukumba "Cedric": nkọwa, akuku na nlekọta
Kukumba "Cedric" - parthenocarpic, ya bụ, ọ bụghị iwu pollination, ụdị dịgasị iche iche na-emeghe. A na-atụ aro ka eto ya na griin ha ma ọ bụ n'okpuru ihe nkiri, ọ bụ ezie na a gaghị egbochi na-akụ ihe na mbara ala. Nke a bụ osisi siri ike siri ike, ọ bụghị ngwa ngwa na nlekọta. Nkọwapụta Ihe dịgasị iche iche nwere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na mkpụrụ mbụ na-eto eto.
Kukumba "Kibriya f1": àgwà na ịkọ agrotechnics
Cucumbers aghọwo akụkụ dị mkpa nke nri anyị kwa ụbọchị, akwụkwọ nri ndị a dị na tebụl anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. Onye ọ bụla na-anọ n'oge okpomọkụ na-etolite ha na akwa ya ma ọ bụ na griin ha. Ụdị dịgasị iche iche dị ịtụnanya ma mee ka ị chee ụdị ụdị mmasị a.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-eche nsogbu nke ụdị cucumbers ịhọrọ maka akuku. Ọtụtụ ndị na-eduzi ndụmọdụ nke ndị enyi ma ọ bụ na-ahọrọ ihe oriri ha na-amasị n'ọdịdị. Otú ọ dị, nke mbụ, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya dịgasị iche iche na mpaghara ihu igwe nke a na-ezube ka a kụọ ya.
Kukumba "Spino": àgwà, ịkọ agrotechnics
Kukumba "Spino" - a ngwakọ na nnọọ n'oge ripening dịgasị iche iche. Ụdị a na-eguzogide ọgwụ na enweghi ìhè ma na-ezubere maka ịgha mkpụrụ na ntụgharị abụọ nke ala ahụ echedoro. Akụkọ gbasara ozuzu Nke a bu ndi ndi ozuzu Dutch si n'aka "Syngenta". Ha kere akwukwo akwukwo ndi ozo.
Olee otú akụ na-eto cucumbers "ọkụ"
Partenocarpic adọ ụdị ụfọdụ nke cucumbers nwere uru dị ukwuu karịa ụdị iche anyị ji - ha adịghị mkpa pollination. N'ezie, ndị na-elekọta ubi adịghị agabiga ụdị dị iche iche. N'etiti ndị a adọ ụdị nke cucumbers na-anọchi anya anyị n'ahịa, ọtụtụ "Shosh F1" pụtara, nke na-bred site na Russian breeders.
Olee otú akụ na-eto cucumbers "Green Stream"
Mmiri ndị na-acha akwụkwọ ndụ F1 na-amalite n'oge ochie bụ ndị na-ewu ewu na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ọbụna kụrụ ogo nke ụdị kacha mma. Hybrids nwere ezigbo mkpụrụ osisi, nakwa dị ka ihe kwesịrị ekwesị maka canning. Enwere ike ịzụlite ha na griin ha na n'ọhịa. Otu esi eme ka Zelentsy na-eto eto na saịtị gị, otu esi achọ ụdị dịgasị iche iche maka ọnọdụ na ma ọ ga-ekwe omume ịmalite mkpụrụ ya - anyị ga-ekwu okwu banyere ihe a niile n'ọdịnihu.
Kukumba "Claudia": nkọwa nke àgwà nke f1 dị iche iche. Ịgha mkpụrụ, nlekọta, mkpụrụ na mkpụrụ osisi (foto)
N'ime ụwa cucumber, ndị na-emepụta ya nwere ekele dị ukwuu maka àgwà ọma nke akwụkwọ nri, ohere nke nmalite ha na ahịa, gụnyere ahịa ahịa buru ibu, na nchedo ha pụọ ​​na ọrịa ndị na-egosi osisi ndị a. Ọ bụ ya mere "Claudia-f1" dịgasị iche iche ji kwesị ekwesị n'etiti ndị bi n'oge okpomọkụ, ndị ọrụ ubi na ndị ọrụ ugbo. Nkọwa dịgasị iche iche Cucumbers nke ụdị ngwakọ a, nke gụnyere na nhazi nke botanical, na ugu ezinụlọ, na-etolite na ụtarị, ogologo ma dị ike.
Olee otú esi akụ na-eto cucumbers "Nne Mamenkin"
Kukumba "Mamenkin pet" - nnọọ a na-ewu ewu onwe-pollinating ngwakọ. Differs na precocity dị elu, dị mma ma maka griin ga-esi na-akọ, nakwa maka na-akọ ihe na-emeghe n'ala. Nkọwa nke klas Mkpụrụ mbụ na-egosi izu isii mgbe e mesịrị Ome. Na akwukwo sinuses nke 3-7 ovaries.
Olee otú akụ na-eto cucumbers "Liliput"
A na-echebe ọtụtụ n'ime ụdị nke cucumbers na ọrịa ndị ọzọ na pests, mana ha adịghị anya ịnweta uto kacha mma, na ihe ndị a chọrọ maka ọnọdụ ndị ọzọ. Taa, anyị na-atụle ngwakọ nke ọ bụghị nanị na-atọ ụtọ, ma ọ pụkwara iche n'ụzọ nke ya. Anyị ga-akọ banyere uru dị iche iche dị iche iche, na-akọwakwa ịkụ ihe n'ọtụtụ ụzọ.